Hargeisa: Muuse Biixi miyuu diiday Inuu la Kulmo Safiirka Shiinaha ee Somalia ? | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Hargeisa: Muuse Biixi miyuu diiday Inuu la Kulmo Safiirka Shiinaha ee Somalia ?
Aug 4, 2020 - 34 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Waxaa Maalintii Saddexaad ku sugan magaalada Hargeisa Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya, Danjire Qin Jian , Waxaana lagu soo warramayaa in weli uusan la kulmin Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Somaliland.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta dhalisay in weli aysan is arkin Madaxweyne Biixi iyo safiirka, balse waxaa qaabilay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Somaliland, maadaama uu Safar ku maqan yahay wasiir Yaasiin Faratoon.
Waxaa la aaminsan yahay in Ujeedka safiirka u tegay magaalada Hargeysa uu yahay sidii uu xukuumadda Somaliland ugala hadli lahaa xidhiidhka ay dhowaan la sameysay Jasiiradda Taiwan, iyadoo Arintaasi uu safiirku si kulul u cambaareeyay.
Illaa iyo hadda lama shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa arrintaasi iyo inuu qabsoomi waayo kulanka Bixii iyo Qin Jian oo hoggaaminayo diblumaasiyiin ka tirsan safaaraddiisa, Waxaana loo Badinayaa in Muuse Biixi uu ka biyo diiday arrintaasi, waana sababta keentay inuu qaabili waayo safriirka oo horey uga horyimid heshiis ay kala saxiixdeen wasaaradaha arrimaha dibadda Somaliland iyo sidoo kale Taiwan.
Waxaa waxa la dareensanyahay in dawladda China doonayso inay Somaliland weydiisato inay ka baxdo xidhiidhka cusub ee Taiwan, iyaga oo is dhaafsaday wakiilo, waxaana taasi si weyn uga hortimid dowladda Shiinaha.
Wakiilka ay Taiwan soo magacowday ayaa ku sugan Hargeysa, iyadoo la filayo in wakiilka ay Somaliland magacowday uu isna dhawaan u ambo baxo Taiwan, Hadii aan wax isku bedelin cadaadiska ka imaanaya dhinaca dawladda Shiinaha.
Somaliland waysku maali hadba kii business plan kiisu na qanciyo ayey noqon furuuqdii kacaanka
Maalin Walba war ka naxaan ayeey kalshaale waraabisaa waar ma kayara dhintaan
Muduloodkiina waa kuwaa soo ruqaansaday,
Hiraabkiina waw hadhay war tii idinku Dhacday 91 kii Mar labaad haw yeedhanina
Muse waa libaax habaro china in somaliland tahay dad iskukalsoon oo yuu oqaadan kuwii uu xarada xalane uguyeedhi jiray hadase wafti culus ayaa ay china sodireen oo imanaya imika kuwasuu lakulmi donaa muse biixi kkkkkkkkkkk somaliland aduunku waxa uu u bixiyay waddankii yaraa ee awooda qarsoon lahaa
Abdirehman Mahamed says:
WELIGAABA QALDAAN BAAD AHAYD
QAAD KASOO DHERGA E
MARKAAD BAARIXIGA QALALEY CUNTAAD
QAROOW CATOOW DAAYE
QAADIRADA TAIWAAN KU GEEYSEY
WAA QAR ISKA TUURE
WAXBA QIIRADA DHURWAAGIYO BOOR
HAYSKU SOO QARINE
QARANIMO INAAD HESHAA
EEBBE KAA QADIYE
QAACIGA IYO HEESA HAAD
SIDAAD U QAADI JIRTEY BAAD
QAAB KU LEEDAHAY
QALBIGAAGA SIIL-LAAND KA SAAR
WAA QAYAALI IYO BEENE
China wafti culus ayay u diraysaa Somaliland maadaama loo juuqi waayay safiirkeeda Somalia.
waxaas ayaa dawladnimo iyo isku kalsooni La dhahaa…
Xiisada Egypt iyo Ethiopiana Somaliland waxay ka faaiiday in Itoobiya safiir buuxa usoo magacawdo Somaliland.
Somaliland cidii daneheeda fulinaysa,ixtiraamaysa jiritaankeedana waa heshiinayaan,laakiin cidii diida u joojin mayso walaa China.
Ala maxaad been isugu jiibisen kuye muuse ayaa
Diiday china kkkkk war isla xishooda qabiil wax ma
Ciwaanka kalshaale ee kor ku qaran waa qalad.
Madaxweyne muuse biixi.oo diiday in uu la kulmo sofiirka chinaha u fadhiya somaliya not. Ma diiday.
Kala aragti duwaananshaha. Kala Go.itaan iyo wada joogitaan. Waa dood furan. Laakiin is xaqiritaanku waa midka halkaa ina dhigay.
Walaalkaa ood u qirto guushiisa.
Walaalkaa ood muuujiso niyad wanaag.
Wexey keeni kartaa In uu isaguna dib u fekero ee uu wax ka bedelo aragtida xun ee uu kaa qabo.
Waxaa laga yabaa. Aragtideydu in ay ku dhibto hadaad tahay qabiili. Hadaad tahay xaasid. Hadaad tahay qof ka xisaabtamaayo cijiyaha hoostooda.
Laakiin waxaa xaqiiq ah. NINKA xukumo dhulkii woqooyi 95% in uu isagu nooga awood badan yahay ama nooga dhawahay midnimo helitaankiida haduu doono.
Waad dhibsan kartaa laakiin waxba uma dhimi kartid.
Waxaan jecelahay midnimo somaliyeed.
Laakiin uma arko in ay tahay muqadas.
Garqaad waad Ku mahadsantahay niyad wanaagaaga.
Daa waxay qorayaan ha qoraanee
Qàbiilka maxaa kasoo galaxy dawladaha dunida ugu quwada weyn?
Armaa ISAAQ sidiisaba qaran Ku yahay dee?
ISAAQ baa ii muuqda ee qaranka Somaliland waan ka indho la’hay
NINBA MEESHA BUGTAA ISAGAY BALBASHAA…
Garqaad iyo dabshid dadka la midkii waa raga ay ahayd in ay hogaanka u qabtaan dawlada fadhida xamar ..
Kanaaba ugu daran duni lays calaashaday ayuu Ku leeyahay one man one vote
Odaygui muxuu yidhi mana waala sideenana maaha .. wadadii adeerkii buu hayaa
Ala hawiyuhu dul badanaa oo Samir badanaa
Maalintii u horaysay ee uu ymid ayuu la kolmay Muse kkkkkk
Waa dadka ugu beenta jecelkkkk.waxay haystaan dad ka dhegaysta,oo beentaasi lagu qulaamiyo kkkkkk
Ugu yaraan bishiiba mar waa in been qaawan loo sheegaa.
Malintii 4 AYUU joogaa wali lamakulmin mujaahid muuse wasiir kuxigeen ka arimaha dibada ayuu lakulmay kkkkkkkkkkkkkkkk waxasaa dowlad layidhaa somaliland waxay aduunka ucadaysay inay tahay maskaxda iyo dadka afka Somaliga kuhadasha
QAACIGA IYO HEESAHAAD
Safiirka China ee Somalia iyo waftigiisu waxay sugayaan Wasiirkii Arrimaha Debadda Somaliland Mr. Faratoon si uu cilaaqaadka labada dal uga wada hadlaan. Sababtuna waxaa weeye, Safiirku ma keenin waraaqihii cadeynaayey (Credentials) inuu yahay Safiirkii China u soo dirsatay Somaliland. WARKU WAA CADYAHAY!
Aarmaajo libaaxii uu dhabtiisa Ku jiifay toos
Maalin dhaw xamar waxaa Ka dhicidoonta
New faqash life’s matter
Markaasay Ku waalataa dalmida
Iyo Somali diid
Boqortooyo hawiye waa in ay Ka dhalataa xamar
It’s time to create a sultanate based on those who sacrificed more then any other tribe
Kalshaale oo miiska soo saarta war jira iyo midaan jirinba maantana waa geddoodii been iyo buunbuunin aanan meelna jirin weeye xaalku.
No wonder why Khatumo State of Soomaalia ilaa hadda u tisqaadi wayday.
Si kastaba Iidoorku waa iska badow sida qabiillada kale laakiin waxay dheer yihiin dhakhsa ma soo baraarugaan. Bal imminka daanyeerka war criminal Biixi ayay ku leeyihiin wuxuu diiday la kulanka safiirka China. kkkkk
Horta aynu is waydiinne in dibloomaasiyaddu lagu wada xaaray waxaa ku tusinaya Safiirka China maxaa ka yaal caasimadda labaad ee qaranka Somalia.
Sow ma joogto Xamar Wasaaradda Arrimaha Dibadda DFS ee uu u gudbiyay waraaqaha aqoonsiga?
Sow ammaankiisa DFS Soomaaliya ma ilaaliso?
Sow dhaqdhaqaaqiisa maahan mid lala socdo oo fasax u baahan?
Ciidanka gaarka ee safiirrada ilaaliya ee Soomaaliya sow lama socdaan mase wuu tahriibay sida Iidoor wagashle noogu sheegaynayaan?
Anigu ma qabo inuu u tagay hargaysa inuu warlord biixi qaabilo. Laga yaaba danaha kale ee shiinaha iyo carabta Soomaaliya ka sameeyaan woqooyiga ayuu u tagay isaga oo fasax iyo ilaalin DFS haysta sida sahminta, la kulanka jawaasiista, ugaadhsiga ugaadha iwm
Waayo China lama hadasho maamul goboleed iska biqleeya in kasta adduunka maanta wax walba suurta gal yihiin.
Khaatumada aad u xilhayso. Sow maaha tii lagala degtay hargeysa oo cali khliif ku cid galay. Mexey tahay laxjaclada khaatumo kuugu hartay?
Aliyoow. Markaanan. Ka fogaano. Qabyaaladda.ma waxaan isku diidanahay go.aanka woqooyi in uu beesha dhexe ka go.o?
Aliyoow. Markaad isaaq neceebka iska dhigto. Yaa hortaagan midnimo somaliyeed. Ma woqooyi misa koofur oo 6 dowladood ah?
Aliyoow anigoo. Og degaan ahaan iyo reer ahaan in aad kasoo jeedo dadka ku hoos nool gumeestaha madoow. Hadana hadaan kuula kuula hadlo sida somalida xurta ah.
Hadii maanta Somaliland lasoo baxdo plan B.
Kuna doodo 1960kii dalku wuxuu ahaa woqooyi iyo koofur. Ee isukaaya keena koofur oo mida maxaa noo diyaarsan?
Somalidu ama waa kala tegi ama waa wada midoobi hadii ilaahey u qori.
Laakiin dadku 2 qolo unbeey noqon.
1 kuwa qabyaaladu indhaha ka riday oo ka noxo hormar iyo wanaag ka socdo dhul somaliyed.
2 kuwa cafimaad qabo oo ku farxo wanaaga dad somaliyeed iyo dad somaliyeed.
Ka garqaad ahaan maahi mid difaaco danaha Somaliland. Ama u ololeeyo kala go.a somaliya. Laakiin waxaan ahay qof aaminsan wax walbo in ay ka bilaabato heshiis bulsho.
Waan ka xanaaqa munaafaqaada reer koofurka ee ah midnimadu waa muqadas.
Waxaan ahay qof xura
Dad badan oo meeshan soo gala waxay qabaan xanuun ah
Inferiority complex sida Kan Ku khafiiftay idoor baa badawa waa cawaan isagoo qaawan Ali zero ayaan maryo kuu xidhay oradoo waxay Ku baxday idoor
Waxaan kaloo ku qoslay dawladaa àarmaajo ayaa ilaalisa safiirka
Cawaan baad tahee xamar waxaa lagu joogaa 20,000 Ugandan army
INTUU hadlay GABDHA DHOOFIYE marna maka maqasheen ISAGOO soo magacqaada Waqooyi amaba Beelaha dega? Taa ku darso TIISI ahayd; “Maamul la dhiso Waxaa ugu dambeeya Galmudug!!!” Waa tii uu ku dayriyay Khaatumo STATE oo u hanweynayd in loo aqoonsado Maamul. ≈©≈Haddaba Anigu waxaan u fasirtay, inuu cuqdo ka qabo reer Waqooyi oo uu isleehay WAA kuwa kaliya oo hammigaaga siyaasadeed Carqaladayn kara ee marna hasoo dhawaysan, MAANTA dhaqankiisaad ka garakartaan Degdegsiga ku jira YACNI yaysan reer Waqooyi kugu soo gaarin, maxaa kaaga dana Al-Shabaab Waddanka ha laga saaro Waaba ii marmarsiye. WBT
Farmaajo oo ka baqay hanjabaadii Mudulood oo soo wada RW mudulood ah.
Hanad Cabdullahi Axmed Cadow
Suldaan dabshid suldaan garqaad
Waar idinkaa afyaqaane Axmed Somali aka oday biiqay muxuu malmaluuqay noo macneeya
Waar jaahil baad tahee mataqaan say Ku baxday idoor
Aan kuu sheegaa barigii awoowayaashaa qaaqaawanaayeen merchant waxaa Ka ahaa anaga caalamka u Kala goosha alaabadaanu u keeno ayaan geel kaga dhaafsan jiray
dadka waydii timirtii horeba dab loowaa say Ku baxday
Ali zero your narritive doesn’t add up
Khaatumada aad u xilhayso. Sow maaha tii lagala degtay hargeysa oo cali khliif ku cid galay.”
Waa runtaa Gallaydh baa garab adhi dhaafsaday so far in personal level.
“Mexey tahay laxjaclada khaatumo kuugu hartay’
Laxjecelaa iga haysa iyada iyo Awdal iwm waxaa weeye hoggaanka Khaatumo unbaa naftiisa baayacaye shacabka sool, sanaag iyo Awdal waa dad ku dheggan midnimada Soomaaliya. Halkaa weeye lax jeclada iga haysa Khaatumo state iyo Awdal iwm
“Aliyoow. Markaanan. Ka fogaano. Qabyaaladda.ma waxaan isku diidanahay go.aanka woqooyi in uu beesha dhexe ka go.o?
kkkkk Meeyay heshiiskaada bulsho. Waar Soomaadan odhan dadku waxay ku jiraan heshiis bulsho. Ma iidoor qudha ayaa heshiis bulsho mase beelaha kale waa Roodhi. kkkk. Kaa diiday saaxiib, Iidoor keligiisa kama go’a go’aanka woqooyiga. Marka arrin masiiri laga hadlaayo iska daayee beelaha woqooyi oodhan xitaa Soomaalida kale oo dhan baa stakeholders ah. Marka ciiddan beel qudha loo daba fadhiisan maayo.
“Aliyoow. Markaad isaaq neceebka iska dhigto”
Waar Iidoorku waa badhkayga ee ha ii odhan waad nacaybtahay iidoor. Horana waan kuu sheegay. Marka siyaasad laga hadlaayo beeshaaa falka wadda waa in laga hadlaa. Aniga waan ka gudbay tafsiirka wadciga ah waxaan ka hadlaa waaqica dhabta ah walaa fakhri aw tazkiya.
“Yaa hortaagan midnimo somaliyeed. Ma woqooyi misa koofur oo 6 dowladood ah?”
Waxaa horaagaan beesha Iidoor save garxajis oo sanadihii dambe si teel teel ah iwm soo baraarugayay.
Bal ii sheeg maxay ku haystaan maamullada 6da a ee Soomaaliya midnimada ?
“Aliyoow anigoo. Og degaan ahaan iyo reer ahaan in aad kasoo jeedo dadka ku hoos nool gumeestaha madoow. Hadana hadaan kuula kuula hadlo sida somalida xurta ah”
Yaa kuu sheegay inaan ka soo jeedo Deegaanka Somaali Galbeed?. Imisa jeer baan kuu sheegay adiga iwm in Suldaanku yahay reer Kismaayood rasmi ah oo xudduuntiisu ku duugan tahay Kismaayo.
Kaba soo qaad inaan ka soo jeedo Ogaden region aka Somali galbeed maxaad ii dheeraan lahayd haddii 20 kun oo Yugaandhiis ah kuugu talinyaan Xamar tira kale oo intaa ka badan ka taliyaan Jubbaland, koonfur Galbeed iyo goonyaha Somalia oo dhan.
Ogow madaxda Soomaaliya soo martay badankeedau waxay ka soo jeedaan dhulka la gumaysto.
Marka ka xorow sheekada Soomaalida xorta ah iyo midda la gumeyso inay kala aragti duwan yihiin. GAW
“Hadii maanta Somaliland lasoo baxdo plan B.
Kuna doodo 1960kii dalku wuxuu ahaa woqooyi iyo koofur. Ee isukaaya keena koofur oo mida maxaa noo diyaarsan?”
Horta Somaliland wax la yidhaa aniga ma aaminsani , wuxuu waa beelo magacayo samaystay like Somalialand, pudhlayn, Jubbaland, koonfur galbeed, hirshabeelle, Galmudug etc!!
Anigoo taagan dhinaca taariikhda saxda ah waxaan odhanayaa Soomaalidu beelo ayay u wada hadli doontaa maadaama ay dhammaantoodo daanyeero aanan qarannimo garanayn yihiin. Laakiin Somaliland vs Somali Italialand waagaasi waa uu dhammaaday……
“Somalidu ama waa kala tegi ama waa wada midoobi hadii ilaahey u qori”.
Midnimadadu waa asalka waanaa inaan ku difaacnaa qalinkeenna iyo qorigeenna. Mustaqabalka caruurtena yeeynaan ku khammaarin. Haddii beel ku guulaysato in magaca Soomaaliya lagu qaran duugayo waa midda Suldaanku ka dagaalayo..
“Laakiin dadku 2 qolo unbeey noqon.
1 kuwa qabyaaladu indhaha ka riday oo ka noxo hormar iyo wanaag ka socdo dhul somaliyed”.
Qaran baan ka hadalaynaa ee kama hadalayno qoys meel xaadhxaadhatay saaxiib. Waana halka aan kugu diidaynahay inaad mowqif waddinayeed saarto tafsiir ama laqabad qabyaaladeed. Yaa xun nin qarankii jaanaaza ku tukunaaa kuna leh igu aaman shabaabkaaan iidiin soo dirayaa aniga nabad gelyo ayay i siiyeen iguna ammaan inaan waddanka kala jarjaro……. Taasi dhici mayso saaxib. kor u bax saaxiib. Aniga kama hadlo shirkada baa la dhistay iyo waddaa iska wax u qabso ayaan ku dhisnay…..that is human instinct. Qarannimo ayaan ka hadlaa iyo Somali territorial integrity oo adiga kula fudud.
“2 kuwa cafimaad qabo oo ku farxo wanaaga dad somaliyeed iyo dad somaliyeed”.
Waan kaaga jawaabay
“Ka garqaad ahaan maahi mid difaaco danaha Somaliland. Ama u ololeeyo kala go.a somaliya. Laakiin waxaan ahay qof aaminsan wax walbo in ay ka bilaabato heshiis bulsho”.
kaa diiday saaxiib, adiga iyo imaamkaada sheekhaaleed aka Uganda lover waxaad is qarinsaanba bannaanka ayaaa is keenteen waanaa midda taariikh madow idiin geli doonta at least in this forum inaad beddeshaan mowqifkiinna.
Dadka qaranka kala guraya ayaad ka dhigtay qofkii yidhaahdama waar maya waa qof hinaasan. Midda kale wax la yidhaa ma jiro social contract qaranka Soomaaliya sidaa laguma maamuli karo.
Hab jadalan for the sake of aurgument haddaan kuu raaco heshiiska bulshaha aad sheegtay, haddii maanta beeshaa ii idoor baxdo oo dhahdo dhul daaqayna waan la goostay, berri dhabayacada tidhaa sidaa oo kale, reer xamar dhahaan sidaa oo kale jubbaland na tidhaa si la mid ah waa kuu ok waayo markii hore waxay ku joogeen heshis bulsho. Maa haakaadaa tuuradu aliblu yaa garqaad.
‘Waan ka xanaaqa munaafaqaada reer koofurka ee ah midnimadu waa muqadas”.
kkkkk nifaaqa Iidoor ee goosashooda muqaaddis weeye iyadana ma ka xanaaqdaa.
‘”Waxaan ahay qof xura”
Laakiin ha kala dirin Soomaalidan adhaxda u jabtay ee qarankeeda Soomaaliya midnimadiisa rabta
Jawaabtaan kuu dhigay under Salaad Jeelle thread haddaad ka gudubtay waa halkeeda
Labadan hawiye madobe ma bentii ayaad kukicineysaa yacni darood ladagaale isbaaro dhigta dabadeed INA godane 2 ayaan idin soodiri waa hadey kaayeelaan
Daanyeerkaada dhagayso ma tihid nin diin, taariikh iyo dhaqanka wax ka yaqaan.
Haddaan qabyaalad rabo wax badan baan kugu odhan lahaa oo uu ku jiro Iidoor waxaa islaamiyay Ogadeenka ama Iidoor waa qoyska keliya oo gumeysiga gaalka Ingiriiska rukuubka u ahaa oo halgankii xoreynta Soomaaliya ka hadhay oo jallaafa u dhigayay laakiin hadalkaygu waa heer qaran dhaafi maayo waayo you can’t measure up to Suldaan Ali Zubeer
Adduunyo dhaxaan daanyeer nijaas Iidoor dood markay joogta nolol duugnay.
Haddaad wax tarayso diinta baro iyo dhaqanka iyo Taariikhda saxda.
Waar meesha geel la raacimaaye
Wax yaroo koobaan maskaxda Yara tuuji
Oo soo qor Twitter adoo kale looma ogala
Mxaa lasheegay maryooley
Wadaadkii waashay ee sayid a Hasan iyo Al shabaab ta maanta jaahilbaad tahee wax u dhaxeeya maleh sayidku wuxuu ahaa Al shabaabtii wakhtigaa
Waxba hayla meeraysan cudurka Somali Ku Jira waa idinka
The last 100 years markay Somali istadhaahdo talaabo horu u qaada kuwa soo celiyaa waa dadkaaga
Haatan way soo dhamaatay baryo iyo walaalayaal Cali Mahdi muxuu yidhi qorigii 91 wali waa ii cabaysan yahay gurigaanuu yaalaa waar hawiye toos khasab baa laydunku rabaynayaa sidii Germany
Waan aqristay. Weliba 5 jeer ayaan ku celceliyay.
Dooduhu waa lagama maarmaan.
INSHA ALLAAH meel ayaan iskugu keeni doonaa.
Dad aan dood iskugu dulqaadan dal mawada yeelan karaan.
Dulqaadku waa Ka xamar halkaa dhigay kaaga Kula lihi kaygana anaa leh
5 years old child would not except that
Dulqaadka loo baahan yahay waa in uu hawiye isu dulqaato kuna soo dabaalo badheedh hashii maandeeq nimaan gayin bay dul joogtaa
Waysasidataa waxay dhalise mooyi
Dadkan meesha waalay oo Muduloodka noo sheegta illeen waa wada SNM is qarinaya…
HGARQAAD IYO DABSHID inayna Mudulood ahayn iyo Hawiye toona ha la ogaado… Waar meesha ciidammadii SNM baa deggen oo koofur isku shodaya…
Markii laga hadlo labadan nin een kor ku xusay iyagaa jawaaba, waxayna gadaan sheeka Iidoor la yiraahdo koofur iyo waqooyi… Saa u fahma xaalka…
Dhaanto dhaandhaan baad keligaa iska tumanaysaaye, midnimadu yey ka dhexaysay marka hore haddana yay ka go’daa? Labadan xorta ah waa la yaqaannaa siad laga yeelayee, waxa hadda waqti iyo dadaal badan inooga baahan xoreynta Jigjiga iyo Gaarisa. Dadaal kasta oo la geliyon waxaaban ogahay inaad la iman doonto “kaan ogeynow arliga absamaa iska leh.
Iska hadlow ina Igarre. Midnimadu kama go’do waxaad ku sheegtay labadaa xorta ah. Baro macnaha qarannimo iyo waxa la yidhaa dalnimada ama dowladnimada. Maalin kasta ciyaalkii kacaanka iyo mooryaantii beelaha ma innagaa u meerin karna macnaha midnimada waxa loo jeedo. Somaliya weligeed mid bay ahayd. Qaybinta cadowga ogow agtayda iyo inta runta taqaan doonaysana badbaadinta qarankan adhaxda u jabay ma rumaysna beenta Iidoor iyo kuwa rumeeyay laba waddan baa midoobay.
Marka saaxiib qaamuuska iyo taariikhda Soomaalida xorta ah ama il sax ah ku akhrisa taariikhda ereyadan gumeystaha u dhiibay Sooomaalida qaar sida laba dal ama gobol oo heli karay inay dowlad noqdaan baa midowbay iwm.
Erey bixinta saxda ah waa qayb ka mid toosinta taariikhda khaladka laga galay Soomaaliya iyo ka hufka Somalia qarinnimadeeda wixii wax yeelaya.
NFD iyo Ogaden region ha u fasirin dhul beel Absame ka maqan yahay. Somali wayn oo dhan baa stakeholders ka ah. Maanta shacabka yaal Nairobi ama jigjiga ama Garissa waa Soomaaliwayn oo dhan oo ku dhaantaynaya magaca Soomaaliya, iyaga iyo DFS oo kaashanaya wadda kasta qalin iyo qori markeeda looga baahan yahay xorinmada dhulka maqan. Halkaa ma ku gowracay hadal xumadaada Arliga Absamaa iska leh. GAW
Nin waddani ah fikir sax caafimaad qaba ha kuu warramo.
Bro isfaham ka fog il beel akhrinta waa u asaas dhisidda qarankan not only in lagu xaaray laakin weli marin habaabinta lagu hayo
Aynu soo dhowayno sidaad tidhi doodda wacan oo dulqaad leh iyo wixii sax ah ee laysugu imaan karo
Down all Somali triators
Wax baad is dhexdhgaysaa aan jirin. Somali Republic, ama Somalia, waa tii dhalatay 1960 ka dib midowgii labadii gobol ee ka xoroobay Ingriis iyo Talyaani. Waxaad isku khaldaysaana waa Somali ethnicity iyo Somali Republic. Burburka ku dhacay Somali Republicna waa siyaasadaa ku salaysan Somali ethnicity oon la jaanqaadi karin waaqaca dunida ka jira, anigaana taa cid walba u caddaynaya. Haddii ay ka shaqayanayso dunida casriga ah in ethnic group kastaaba ay dalwad isku mida yeeshaan taa anaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuuli lahaa si Somalida ku nool Ethiopia, Kenya iyo Djibouti meel isugu yimaadaan. Waxay u suurtoobi wayday Jarmal inay dadka jarmalka ahoo dhan, oo hadda ku kala nool Austria, Switzerland, Holland iyo Check Republic dal keli ah, Germany, isugu keenaan. Siyaasad ku salaysan Somali ethnicity to the cost of Somali Republic – cidna laga yeeli maayo.
Waar waxba isma dhexdhigine ha xujoobin. Waayo wixii laguu meeriyay baad weli dabada haysaa.
Warkaada waxaa burinaya Somalida Kenya tagtay after 1991. Waa wada Somali Kenyan. Cid hoy ka tidhina malaha NFD. Si fiican bay u sarrifteen magaca Somali nation bilaa xuduud. Likewise, Mustabaqiyada laga qaato Jigjiga iwm.
Somalia ayaa dhalatay 1960 oo laba gobol ka kooban waa miisan aanan ku jirin meel la hubo marka ila sax lagu eego magaca Somalia. Waayo halbeeggaadu wuxuu ku dhisan gumeysi baa qaybiyay iyo calanka waxaa la taagay 1960 after 2 gobol isu soo ololeen. Ka hor dalkan sow ma jirin mase roodhi buu ahaa. GAW
Suaashayda ka jawaab, midnimada Soomaaliya ma mid dhalatay baa 1960 baa mise waa soo jireen gumeysiga kala teeday.
Wax la yidhaa ethnicity waa political jargon lagu maaweeliyo shucuubta xoog lagu kala teeday.
Xitaa haddaan kugu raaco for the sake of argument in sidaad u dhigtay oo laba gobol baa midoobay , sow kama bixi karo mid ka ah midnimadaasi lagu waqtiyeey 1960.
Ka warran maamul goboleedyan imminka biqleeyay haddii ay diidaan ka mid sii ahaanshada qaranka Soomaaliya oo ay yidhaahdaan waxaannu nahay dowladu madax bannaan sida Iidoorka.
Somali name and its unity does entail the nationhood that precede colonization era, action, language, concepts and legacy etc. Hence reject Somali nationhood has boundary in real political geopolitics. So stop political incorrectka aad meedhinayso in which its detrimental to very existence of Somalia nation.
Alla dhaxaan u soo joogay rag wixii ingiriis iyo Allore talyaani qoray run mooday oo dib loo galaal xoodhiyay.